2 Samueri 21 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Samueri 21:1-22
21 Zvino nzara+ yakavapo mumazuva aDhavhidhi kwemakore matatu, gore negore; uye Dhavhidhi akabvunza Jehovha. Jehovha akabva ati: “Sauro neimba yake vane mhosva yeropa, nokuti akauraya vaGibhiyoni.”+ 2 Naizvozvo mambo akashevedza vaGibhiyoni+ akataura navo. (Sezvineiwo, vaGibhiyoni vakanga vasiri vevanakomana vaIsraeri, asi ndivo vakanga vasara pavaAmori;+ uye vanakomana vaIsraeri vakanga vavapikira,+ asi Sauro akatsvaka kuvauraya+ paaivaitira godo+ nokuda kwevanakomana vaIsraeri naJudha.) 3 Dhavhidhi akati kuvaGibhiyoni: “Ndokuitirai chii, uye ndokuyananisirai+ nei, kuti mukomborere nhaka+ yaJehovha?” 4 Naizvozvo vaGibhiyoni vakati kwaari: “Hatidi sirivha kana ndarama+ kuna Sauro neimba yake, uyewo hatisi isu tinofanira kuuraya munhu pakati paIsraeri.” Iye akati: “Ndichakuitirai zvose zvamunotaura.” 5 Ivo vakati kuna mambo: “Murume akatiparadza,+ akaronga+ kutitsakatisa kuti tisagara munharaunda chero ipi zvayo yaIsraeri, 6 tipei varume vanomwe pavanakomana vake;+ tivaise pachena+ pamberi paJehovha muGibhiya+ raSauro, iye akasarudzwa naJehovha.”+ Naizvozvo mambo akati: “Ndichakupai ivo.” 7 Asi mambo akanzwira tsitsi Mefibhosheti+ mwanakomana waJonatani mwanakomana waSauro nokuda kwemhiko+ yaJehovha yaiva pakati pavo, pakati paDhavhidhi naJonatani mwanakomana waSauro. 8 Naizvozvo mambo akatora vanakomana vaviri vaRizpa+ mwanasikana waAya vaakaberekera Sauro, Arimoni naMefibhosheti, nevanakomana vashanu vaMikari+ mwanasikana waSauro vaakaberekera Adrieri+ mwanakomana waBhazirai muMehora. 9 Akabva avaisa mumaoko evaGibhiyoni, ivo vakavaisa pachena mugomo pamberi paJehovha,+ zvokuti vanomwe vacho vakafa pamwe chete; uye vakaurayiwa pamazuva okutanga kukohwa, pakutanga kwokukohwa bhari.+ 10 Zvisinei, Rizpa mwanasikana waAya+ akatora masaga,+ akazviwaridzira padombo kubvira pakutanga kwokukohwa kusvikira mvura yanaya pamusoro pawo ichibva kudenga;+ uye haana kubvumira shiri+ dzokudenga kuti dzimhare paari masikati kana kuti mhuka dzomusango+ dzirare paari usiku. 11 Dhavhidhi akazoudzwa+ zvakanga zvaitwa nomurongo waSauro, Rizpa mwanasikana waAya. 12 Naizvozvo Dhavhidhi akaenda, akanotora mapfupa aSauro+ nemapfupa aJonatani mwanakomana wake kuvaridzi venyika yeJabheshi-giriyedhi,+ vakanga vavaba munzvimbo yaiungana vanhu yeBheti-shani,+ mavakanga vaturikwa+ nevaFiristiya zuva rakaurayiwa Sauro muGiribhoa+ nevaFiristiya. 13 Akauya nemapfupa aSauro nemapfupa aJonatani mwanakomana wake kubva ikoko; uyezve, vakaunganidza mapfupa evarume vaiva vaiswa pachena.+ 14 Vakabva vaviga mapfupa aSauro neomwanakomana wake Jonatani munyika yaBhenjamini muZiira,+ munzvimbo yemakuva yababa vake Kishi,+ kuti vaite zvose zvakanga zvarayirwa namambo. Naizvozvo Mwari akabvuma kutetererwa nokuda kwenyika pashure peizvi.+ 15 Zvino vaFiristiya+ vakarwazve nevaIsraeri. Naizvozvo Dhavhidhi akaenda nevashandi vake, vakarwa nevaFiristiya; uye Dhavhidhi akaneta. 16 Ishbhi-bhenobhu, aiva mumwe wevaya vakaberekwa nevaRefaimu,+ aiva nepfumo+ rairema mashekeri mazana matatu emhangura uye aiva akasungirira bakatwa idzva, akafunga zvokuuraya Dhavhidhi. 17 Abhishai+ mwanakomana waZeruya akabva abatsira+ Dhavhidhi, akawisira muFiristiya wacho pasi, akamuuraya. Panguva iyoyo varume vaDhavhidhi vakamupikira, vachiti: “Hamufaniri kuendazve nesu kuhondo,+ kuti musadzima+ rambi+ raIsraeri!” 18 Zvino pashure peizvi, hondo yakamukazve nevaFiristiya kuGobhu. Sibhekai+ muHusha+ akabva auraya Safi, aiva mumwe wevaya vakaberekwa nevaRefaimu.+ 19 Hondo yakamukazve nevaFiristiya kuGobhu, Erihanani+ mwanakomana waJaare-oregimu muBhetrehema akauraya Goriyati muGati, aiva nepfumo raiva nomubato wakanga wakaita sedanda revaruki.+ 20 Hondo yakamukazve kuGati,+ kwaiva nomumwe murume aiva akanyanyisa kukura, aine minwe mitanhatu paruoko rwake rumwe norumwe nezvigunwe zvitanhatu patsoka yake imwe neimwe, zvose zviri makumi maviri nezvina; iyewo akanga akaberekerwa vaRefaimu.+ 21 Akaramba achishora+ Israeri. Jonatani+ mwanakomana waShimei,+ mukoma waDhavhidhi, akazomuuraya. 22 Ava vari vana vakanga vaberekerwa vaRefaimu muGati;+ uye vakaurayiwa naDhavhidhi nevashandi vake.+